အင်ကြင်းသန့်: “အသွင်ပြောင်း မိုးတိမ်”
ငါ့တိမ်ငွေ့တွေကို ပြန်ပြန်ရုတ်ခဲ့ရတယ်။ ။
ရာနှုန်းက ကိုးဆယ်တဲ့လေ....။ ။
Posted by အင်ကြင်းသန့် at 10:02 PM
ရွာရန် ရာနှုန်း ၉၉ မဟုတ်လို့...
ညီမလေးရေ... ပျောက်နေလို့ စိတ်ပူနေတာ။ အခုလည်း ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။ နှလုံးသားထဲမှာ ရာသီဥတုကလည်း ပြင်းထန်နေပြီနော်။ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တော့ မဟုတ်သေးဘူးပေ့ါ။
ရာနှုန်းက ကိုးဆယ်တဲ့လေ...။ ။
နေ့စဉ်တော့ မရွာပါနဲ့ ညီမရယ်
Wai Soe said...
ပင်လယ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားအုံးမယ်နော်...။ အသွင်ပြောင်းပြီး ရွာဖို့အတွက်က သိပ်မလွယ်ကူဖူးလို့ထင်တယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရမှာပေါ့...။
ညီမလေးရေ.. သားသားကိုလည်း လွမ်းတယ်၊ အလုပ်လည်း များနေလို့ပါ...။ ငါ့ညီမလေးဆီ နောက်တခါလာတာ လှေနဲ့လာရတယ် သိလား..။ မိုးကြီးပြီး ရေတွေပါ ကြီးနေလို့..။း)
ကဗျာလေး ခံစားသွားတယ် ညီမ အင်ကြင်း ဖွဲ့ထားတာလေး လှတယ်...:)
မင်းရဲ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ......ငါ့တိမ်ငွေ့တွေကို ပြန်ပြန်ရုတ်ခဲ့ရတယ်။ ။
အေးချမ်းလှတဲ့ မိုးရေစက်လေးတွေကို မျှော်လင့်နေတဲ့ အဲ့ဒီမြေကမ္ဘာရှိတဲ့ သက်ရှိ သက်မဲ့တွေအားလုံး အတွက်တော့
အမက ကဗျာရေး သိပ်တော်တာပဲ။ ခံစားသွားပါတယ်
wow! great poem that's so smooth than the rest of your poems. I feel like that you are still remembering somebody. Is it? I just gonna to know where you wanna to change for raining. But Honey! you don't rain everyday because I m so scare for flooding at here even if I work in ship building company. One more things, I don't know how to swim in the tear of ocean.
may you be happy......
မိုးလေဝသ သတင်းဌာနကြီးက ရော ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ယုံကြည် ရ မလည်း..
သူပြောတိုင်းလည်း မယုံ နဲ့ သိလား...
နာဂစ် ကို သတိရ လိုက် မိလို့ ...း(
အချစ်မိုးလေးတွေပဲ ရွာပါစေ ညလေး ရေ ..
ကဗျာလေးကကောင်းပါ၏ ။ရွာရန်ရာနှုန်း ၉၀ တဲ့လား အင်ကြင်းရေ....အဲဒီလောက်ကြီးတော့မလုပ်ပါနဲလား။ မျက်လုံးလေးတွေထိခိုက်လိမ့်မယ်ဗျ။ :)
ဘယ်သူ့အတွက် ၉၀% ရွာဖို့ရှိတာလဲ
အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါ... :)
ပျောက်လှချည်လားဗျ။ အိုင်စီနဲ့ ရန်ကုန်အတူပြန်သွားပြီထင်နေတာ။။ လက်စသတ်တော့ မိုးလေ၀ဿမှာ သတင်းကြေငြာနေတာကိုး။ (နောက်တာ..ဟီးး)
ကဗျာလေးကို ဖတ်ရင်း မအင်ကြင်းရဲ့နှလုံးသားထဲအထိ တိုးလျှိုးပေါက်မြင်လိုက်ရပါတယ်။
ဒီနေ့ ကဗျာချည်းပဲ လာဖတ်သွားတယ်၊
နေ့ရာသီ ညရာသီ ကိုစဉ်စားနေတာ ??
အပိုင်း၂ မနက်ဖြန်တင်ဘို့ ကြိုးစား နေတယ်၊
အိမ်း... အိမ်း... ၀မ်းနည်းစရာတွေပဲတွေ့နေရပါလားကွယ်တို့...........
အင်ကြင်းရေ..မှန်တာပြောရရင် အမ ငယ်ငယ်ထဲက ကဗျာကို သိပ်ပြီးမခံစားတတ်ဘူး..ဒါပေမဲ့ အခု အင်ကြင်းရဲ့ ကဗျာလေးကိုတော့...နင့်နင့်နဲနဲ ခံစားရပါတယ်...Bravo !!!!!!!!!!!
ရွာရန် ရာနှုန်...100 ဖြစ်နေပြီကွယ်..။
မိုးလေ၀သ က အမြဲမှားတတ်တာပဲ.. မရွာဘူး.. ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်တောင် နေပူနိုင်တယ်... :P
အမ မအင်ကြင်ရယ် နောက်တစ်ခေါက် လာရောက်အားပေးသွားပါတယ်...။
လာလည်ရင်း တခါတည်း မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အင်ကြင်းရေ ကျတော်တို့ SITE မှာ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ပွဲထုတ်ထားတယ် သူက ပုံမှန် တဲ့ အားပေးလှဲ့ ပါဦးဗျာ..TQ
အထက်ပါ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်ရွေ့
ဦးနှောက် သတင်းဌာနမှ ထုတ်ပြန် ကြေငြာ လိုက်သည်မှာ......
နှလုံးသားက ကြေငြာချက်ဆိုရင်တော့ မှန်နိင်ပါတယ်။
အချစ်မိုးဘယ်တော့ရွာမှာလဲ .... သီချင်းလေးတောင်ညည်းဖြစ်သွားပြီ
အလဲ ... :)
play list အသစ်လေးနဲ့ပါလားနော်။
နားထောင်လို့ကောင်းတယ် ဖြုတ်မပစ်နဲ့နော် အမ။
ထမင်းဆာတိုင်းလည်း လာနားထောင်မယ် :)
နေကောင်းတယ်နော်.. မတွေ့ရတာကြာလို့ လွမ်းမိပါတယ်။ လွမ်းလို့လာကြည့်ရင်းနဲ့ သီချင်းတွေ့လို့ နားထောင်သွားတယ်။ နောက်နေ့မှ အကုန်နားထောင်တော့မယ်။။ပိုစ့်အသစ်မဖတ်ရလည်း သီချင်းနားထောင်လို့ရလို့ ကျေးဇူးနော်..။
လား လား လာ လာ လား လား.. ၀ိုး ၀ါး... ကျွဲလိုက်လို့ အသက်ကုန်ပြေးလာတယ် အမရေ။
အချစ်မိုးကြီး ဘယ်ဘက်သွားရွာမလဲလို့ လာချောင်းကြည့်တာလည်းပါတယ် :)
နေကောင်းတယ်နော်.. ။ သတိရလို့ လာကြည့်တာ..
အချစ်မိုးတွေ ရွာတော့လေ ပူလှပြီ
အင်ကြင်းလည်းနောက်ဆုံးတော့ ရင်ဘတ်ထဲက အနာတွေ ထုတ်ပြလာပြီပေါ့လေ.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်...
၀ါးးးးးးးသိပ်ကောင်တဲ့ ကဗျာလေး။ အရမ်းကောင်းတယ်
အစ်မရေးထားတွေက ဆင်ခြင်သတိပြုဖွယ်၊ လိုက်နာဖွယ်ရာနည်းလမ်းကောင်းတွေပါဗျာ ...။
မောင်နှမ၊ ဆွေမျိုးသားချင်တွေအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာစကားတွေကလည်း အဖိုးထိုက်တန်ပါတယ်။
ဒီမှာတော့ အေးဂျင့်မကောင်း အလုပ်ဂျောင်းရတာ မကြာခဏဆိုသလို ကိုယ်တွေ့ရော၊ သူများအတွေ့အကြုံတွေအရရော စုံမှစုံပါပဲ။
နောင်များမှ အလျဉ်းသင့် အဲဒီအကြောင်းတွေရေးပါဦးမယ်။
ကဗျာလေးတွေအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ.. အလွမ်းကဗျာတွေအရင်က သိပ်မဖတ်ဖူးဘူး.. ဘ၀မှာ လောကကြီးက ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေပဲ ဖတ်တာများတာ..
မအင်ကြင်းရဲ့ကဗျာတွေ အဖွဲ့တွေ အရမ်းနွဲ့ပြီး အရမ်းလှတယ်ဗျာ..
ကိုယ့်အကြိုက် (ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့ လုံချည်လေးတွေ)